မြင်းများလူ့ Emotion Recognise ​​နိုင်သလား - သတင်း Rule
မြင်းများလူ့ Emotion Recognise ​​နိုင်သလား
စိတ်ပညာရှင်သည်မြင်း positive နဲ့ negative လူ့မျက်နှာအသုံးအနှုန်းများအကြားခွဲခြားနိုင်ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသပြီ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မြင်းများလူ့စိတ်ခံစားမှုကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်, လေ့လာမှုအသစ်ပြသ” တိ Radford ကရေးသားခဲ့သည်, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 10 ကြိမ်မြောက်ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2016 07.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အမျက်ထွက်ကြည့်နေတဲ့မြင်းသင်တစ်ဦးဘေးတိုက်တစ်ချက်ပေးရဖွယ်ရှိသည်: ၎င်း၏ဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့ဘက်ခြမ်းကို အသုံးပြု.. ၎င်း၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုးပွါးစေ, လွန်း. ထိုအခါနှစ်ဦးစလုံးဟာမြင်းလူသားတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအသိအမှတ်မပြုနိုငျသောလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်.
Sussex တက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာရှင်, အဘယ်သူသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြုစုတဲ့ မြင်းအတွက်စိတ်ခံစားမှုကိုညွှန်ပြအံ့သောငှါမျက်နှာအသုံးအနှုန်းများ၏အဘိဓါန်, သူတို့ပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုလှည့်ပြီဟုအစီရင်ခံစာ: သူတို့တစ်တွေလူ့မကျြနှာကိုဖတျရှုဖို့ equine စွမ်းရည်စူးစမ်းကြပြီ.
ထိုအခါလူအပေါင်းတို့၏အနှစ်သက်ဆုံး neigh-sayer သာလူသားတစ်ဦးတစ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိစေခြင်းငှါရှိမရှိမပြောနိုင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကနေဒါလုပျနိုငျ.
Related: ကျီးအပေါ်စူးစမ်းခံနေရစိတ်ကူးနိုင်, လေ့လာမှုကိုတွေ့
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်ဂျာနယ်အတွက်သတင်းပို့ရန် ဇီဝဗေဒပေးစာ သူတို့အရည်အသွေးမြင့်မားစေ, ကြီးမားသောအရွယ်အစားတူညီအထီးလူ့၏အရောင်ထုတ်သူ၏သွားပြုံးနှင့် baring, နှင့်သူ၏သွားမှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့ baring: တကျွန်းတနိုင်ငံသားကနေ positive နဲ့ negative စိတ်ခံစားမှု၏အသုံးအနှုနျး. စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထင်ရှားသောအရာကိုမသိသောသူ - ရန်သူတို့ကိုပြသ 28 Sussex နှင့် Surrey ၌ငါးစီးနင်းသို့မဟုတ် livery တည်ငြိမ်တဲ့အထဲကမြင်းများ. ထိုအခါမြင်းခြားနားချက်ကိုပြောပြနိုင်.
"ဘာဒီသုတေသနလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့င်ကမြင်းမျိုးစိတ်အတားအဆီးဖြတ်ပြီးစိတ်ခံစားမှုဖတ်နိုင်စွမ်းရှိကိုပြသကြောင်း. ကျနော်တို့မြင်းများဟာလူမှုရေးအရခေတ်မီမျိုးစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီသာထိုသူတို့သည် positive နဲ့ negative လူ့မျက်နှာအသုံးအနှုန်းများအကြားခွဲခြားနိုင်သည်ကိုမြင်ကြပြီပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာသိ,"မေီ Smith ကပြောပါတယ်, တက္ကသိုလ်ရဲ့နို့တိုက်သတ္တဝါအသံဆက်သွယ်ရေးနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကတစ်ဦးပါရဂူကျောင်းသား.
"အမျက်ထွက်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းများရန်တုံ့ပွနျမှုအထူးသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့ - သူတို့ရဲ့နှလုံးမှုနှုန်းမှာမြန်တိုးရှိ၏, နှင့်မြင်းများဟာသူတို့ရဲ့လက်ဝဲမျက်စိနှင့်အတူအမျက်တော် ထွက်. မျက်နှာများကိုကြည့်ဖို့မိမိတို့ခေါင်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ "
Related: Gorilla သည်းထိတ်ရင်ဖို: ဝံအဘို့အသိပ္ပံပညာရှင်များတိုက်ရိုက်တိုတိုရုပ်ရှင်တွေ
Dogs ကိုလက်ဝဲမျက်စိနှင့်အတူအမျက် ထွက်. လူ့မျက်နှာများကိုကြည့်ရှုအားပြခဲ့ကြ: လက်ဝဲမျက်စိကနေသတင်းအချက်အလက်မှတျတမျးတငျထားနှင့်အနက်သည်အဘယ်မှာရှိ - ထိုဆင်ခြင်ခြင်းဦးနှောက်၏လက်ျာကမ္ဘာခြမ်းဖြစ်ပါတယ် – ကြောက်စရာသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်. သိုးတို့ကိုပြသပြီ အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အခြားသိုးဓာတ်ပုံတွေအားဖြင့်စိတ်ချမ်းသာခံရ, နှင့်ပင်သိုးနဲ့လူသား၏မျက်နှာများမှတ်မိဖို့
ကရင် McComb, အဘယ်သူသည်သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်လေ့လာမှု Co-ခဲစာရေးဆရာအကြီးအကဲ, မြင်း၎င်းတို့၏ပူးတွဲဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းလူ့မျက်နှာအသုံးအနှုန်းများဖို့သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်ရန်အခြားမြင်းများအတွက်စိတ်ခံစားမှု cues စာဖတ်ခြင်းတစ်ခုဘိုးဘွားစွမ်းရည်မွေးစားကြပေမည် "ဟုဆိုသည်. တနည်းအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းစီသည်မြင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တစ်သက်တာကာလအတွင်းလူ့အသုံးအနှုနျးအနက်ကိုဘော်ပြမှလေ့လာသင်ယူကြပေမည်။ "
24392	12 တိရိစ္ဆာန်အမူအကျင့်, အပိုဒ်, ဇီဝဗေဒ, အဓိကအပိုင်း, သတင်း, စိတ္ပညာ, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, တိ Radford, ဗြိတိန်သတင်း
←7သင်သိပါသသည်မဟုတ်သောအရာတို့ကိုတည်ရှိ [VIDEO] သင်ကမြေထုဆွဲအားလှိုင်းတံပိုးတို့သည်အကြောင်းသိပါဖို့လိုအရာအားလုံးကို →